घर एशियाई-ओशियनियन फुटबल स्टोरीहरू ओसिनिया फुटबल खेलाडीहरू टिम Cahill बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल प्रतिभाको पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा प्रसिद्ध हो; 'टिम्मी'। हाम्रो टिम काहिल बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरूले तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण विवरण दिन्छ।
विश्लेषणमा प्रसिद्धी, पारिवारिक जीवन र धेरै अफ र अन-पिचको बारेमा थोरै ज्ञात तथ्यहरू अघि उनको जीवन कहानी समावेश छ। निस्सन्देह, टिम काहिल अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा सफल एथलीट मध्ये एक मानिन्छ। अब उनको व्यक्ति मा गोता दिनुहोस्।
काहिलको जन्म December डिसेम्बर १ 6। On मा सिडनीमा आयरिश वंश (टिम काहिल स्नर) र एक सामोआकी आमा (Sisifo Cahill) मा भएको थियो।
उहाँ सानो छँदा फुटबल खेल्न प्रोत्साहित हुनुभयो, यद्यपि उहाँ धेरै ठूलो रग्बी खेल्ने परिवारमा हुर्कनुभयो। तैपनि, टिमले चासो लिए फुटबल। उनको एक मनपर्ने शौक बर्कलेन्स प्रिमियर लिग देखिरहेको थियो। आदर्श रूप मा, उनले के गर्न सक्थे कि धेरै अष्ट्रेलियनहरूले कडा मेहनत गरे। त्यो रातको मृत घेरामा जागिर रहिरहेको छ (12: 00 मध्य रात- 4: 00 एम) हरेक अंग्रेजी अंग्रेजी लीग कार्य हेर्न केवल।
जहाँसम्म फुटबलको सवाल छ, कठोर अष्ट्रेलिया र बेलायती समय फरकले धेरैलाई खेल हेर्न बाधा पुर्‍याएको छ। थोरै year बर्षको उमेरमा, उनी एभर्टन फुटबल क्लबको समर्थनमा हुर्किए। मध्य's० को प्रभुत्वमा रहेको अंग्रेजी फुटबलको रूपमा क्लब। तिनीहरूले १580 / १ 1985 .1986 र १ 1986 1987 / १ XNUMX .XNUMX सत्रमा प्रीमियर लिग जितेका थिए। टिम आफ्नो मनपर्ने एभरटन स्ट्राइकरबाट हेरीरहे र सिकेर हुर्किए, गैरी लाइनर.
एक जवान बच्चाको रूपमा, यो रातको मृत घेरामा जागिर हुन अस्वीकार्य थियो। टिम काहिलले आफ्नो ब्रिटिश जन्माएको पिताबाट आधी रात सम्म हुने विशेष अनुमति खोज्नु भएको थियो जसले पनि अङ्ग्रेजी अंग्रेजी फुटबल समर्थक थिए। त्यसैले तिनीहरू दुवै सँगै भेटिए। टमको अनुसार,
म वास्तवमा चलचित्रहरू देख्दिन। म या त बार्कलेज प्रीमियर लिग फुटबल खेल्छु वा हेर्छु। मलाई बच्चाको रूपमा प्रिमियर लिगमा खेलहरू हेर्न रमाईलो लाग्छ। म कसरी आराम गर्दछु। म सँधै हलवेहरू ... प्रीमियर लिग फुटबलको विश्व कप र त्यस्तै चीजहरूको फ्लिकिंग देख्न सक्दछु। I त्यसपछि फेरि पेशेवर खेलाडीहरूको ख्याल थियो। मैले उनीहरूको कलालाई कदर गरें, ” उसले भन्यो।
"त्यसबेला एक सक्रिय फुटबलरको रूपमा म त्यस चरणमा कत्ति कडा गाह्रो भएको थियो भनेर सोच्दछु, र जब म त्यहाँ हुन्छु, म वरिपरि हेर्छु र आफूलाई एउटा सुरुnelमा उभिएको देख्छु र म रुउड भ्यान निस्टेलरोयको छेउमा उभिरहेको छु, ' मी थिअरी हेनरी, रोबी र रोय केन, ओवेन, र रोबर्ट पाइर्सको छेउमा उभिरहेको छु। यो बिन्दुमा म आफैलाई भन्छु कि, "वाह, मैले अन्ततः जीवनमा यो बनाएको छु"। त्यसो भए म आफूलाई फेरि भन्छु, "tयहाँ कुनै तरिका छैन म उनीहरूको जर्सी बिना यो पिचबाट बाहिर आउँदैछु। ”
यो कुरा भन्न लायकको छ कि टिम क्यालका अभिभावकहरूले उनलाई शीर्षमा ल्याउन सबैभन्दा ठूलो त्याग गरे। यो लामो टुक्रा मा वर्णन गरिनेछ। उसका आमा बुबा आफ्नो बुद्धिमत्ता मन पराउनुहुन्छ।
उनले सबै रात मिल्दो हेर्न सक्थे र अझै पनि दिनको समयमा निद्राको कुनै पनि संकेत देखाउँदैनन्। उनले आफ्नो कक्षामा आफ्ना आमाबाबुलाई दाबी गरेका थिए।
तर,रग्बी देखि फुटबल बाट
टिम कैहिलले आफ्नो स्टुडी रग्बी लीग प्ले चाइल्ड्सको वरिपरि घिमिरे जसले उनलाई फुटबल बिर्सने र खेल खेल्न थाले। एक सानो केटाको रूपमा, तिनले कहिलेकाहीँ तिनीहरू रग्बी खेल्न उनीहरूको पछि लागे। उनले यो गरे किनभने उहाँले खेललाई माया गर्नुभएन, तर उहाँका पुतिहरूको प्रेमको बाहिर।
हे तिनको बुबा (टिम काहिल स्नर) उहाँलाई बन्न चाहिएको सबै कुरा हुन चाहन्थे। यो उनको आमा (सुसिफो) थियो जसले उल्लङ्घनलाई उनको छोरा रग्बी खेल्दा इन्कार गर्यो। उनी डराए कि खेल र अधिक खतरनाक थियो र उनको छोराले यो बाट कडा चोट लगाउन सकेन।
तर निरन्तरताले गर्दा उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई डरलाग्दो डरलाग्दो चिन्ता गर्छिन्, तिनले आफ्नो पतिलाई विवाह गरेकी थिइन्। "सुरक्षित खेल" फुटबलको। धेरै समय लागेन टिमको कान्छो भाई शानले उही फुटबल अनुसरण गरे।
तर,उनी कसरी इङ्गल्याण्डमा गए
दुबै अभिभावक (टिम काहिल स्नार र सिसिफो) सँगै एक छोरालाई इ England्ल्याण्ड लैजानका लागि १०,००० डलरको loanणमा उतारे। उनीहरूले निर्णय गरे कि यो इंग्लिश फुटबलको लागि लामो समयदेखि प्रेमको कारण टिम हुनेछ।
परिवारले निर्णय गरे कि उनको अस्ट्रेलियाई प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने यो एकमात्र अवसर हो। तिनीहरूले स्काउट्सको साथ धक्का दिए र उनीहरूको छोरा, टिम १ 1998 XNUMX in मा मिलवाल एफसीसँग ट्रायल गर्न लन्डन गए। उनका परिवार टिमको यात्रा पछि भाँचिए। उसको कान्छो भाइले जागिर पाउन स्कूल छोड्नु परेको थियो। उसले घरमा आर्थिक सहयोग गर्न यो गर्यो।
टमको अनुसार, “अझै सम्म, आज सम्म त्यस्तो कुनै दिन छैन जुन म सोच्दिन। म यसलाई सुन्दर दाग भन्छु, " उसले भन्यो।
उनको परिवारले आर्थिक रूपमा संघर्ष गरेपछि उनले छोडेपछि आफ्नो ऋण सेवा गरे। तिनीहरू दुवै एक कारखानामा टाढा घण्टाको लागि काम गर्थे र उनीहरूको छोराले यो नभएसम्म जीवनको निम्न स्तरको काम गरे।
उनको आमाको अनुसार, “हामीसँग आर्थिक कुनै विकल्प छैन। हामी उनको पैसा उनको सपनाहरु को माध्यम बाट हेर्न को लागी खर्च गर्न सक्दैनौं। त्यसैले हामीले takeण लिनुपर्‍यो। हामी वर्षौं torsणी भयौं। हामी खुसी छौं हाम्रो बलिदान चुक्ता भएको छ। हामी केवल उनलाई चाहन्थ्यौं कि एक फुटबलरको रूपमा सफल हुन जो प्रिमियर लिगमा खेल्ने थियो। खुसीको कुरा अन्तमा यो आएको छ ”
जब काइल इ England्ल्याण्ड आइपुगे उनले एउटा बेडरूमको घर भाडामा लिए। उनले आफ्नो परीक्षामा सफल हुन कडा लडे। पछाडि, उसको प्रयासको परिणाम भुक्तान गरियो। उहाँ मिलवालले १ 1998 XNUMX in मा हस्ताक्षर गर्नुभयो। आफ्नो पुस्तकमा 'टिम काहिल लिगेसी', उनले लेखे कि उनले 5,000 लाई साइन-इन शुल्क शुल्क सीधा घरलाई ऋणको लागि भुक्तानीको रूपमा पठाउँथे।
तपाईं उनको फुटबल मजदूरी कम थियो। उहाँले अझै ऋण सेवा गर्न सुरक्षित गर्नुभयो र पनि 5,000 पाउन्ड पाउनुभयो। त्यसपछि परिवारले पैसाको साथ घरमा आफ्नो पहिलो पटक जम्मा गरेको छ।
तर,रग्बी परिवार जडान
टिम काहिल सामोनका फुटबलर र समोआका पूर्व कप्तानका भाइ हुन्, क्रिस कैहिल. उनका धेरै आफन्तहरू रग्बीमा संलग्न छन्। वास्तवमा, तीन भान्जा भाइहरू पेशेवर रग्बी खेल्नमा मग्न भएका छन्। तिनीहरू समावेश छन् बेन रबर्ट्स (न्यूजील्याण्ड रग्बी लिग) र जेरेमी स्टेनली (न्यूजील्याण्ड रग्बी संघ)।
फेरि, तिनका दुइजना भतीजहरू जो पेशेवर रग्बी लीग खेलाडी हुन्, चेस स्टेनली र केली स्टेनली रग्बी यूनियन पेशेवर स्या स्ट्यान्ले (सारासेन्स र इ England्ल्यान्ड U20), माइक स्टेनली (सामोआ), Benson Stanley, र विंस्टन स्टेनली.
टिम काइलले मे २०१० मा बाल्यावस्थाको प्यारी, रिबेका ग्रीनहिलसँग विवाह गरे। उनीहरूको चाँडै सँगै चार बच्चाहरू पनि थिए। यो कुनै खास लास भेगास विवाह थिएन तर विश्व-प्रसिद्ध बेलाजीयो होटलमा 2010० भन्दा बढी सहयोगी साथीहरूले हेरिरहेका थिए। आफ्नो विवाहको दिन, टिम काइलले आफ्नी पत्नीलाई भने; "तपाईं मेरो सब भन्दा राम्रो जीवनसाथी हुनुहुन्छ, मेरो सबै कुरा।"
टिम काहिल भन्छन् कि उनले र पत्नी रिबेकाले कहिल्यै ग्लैमरस जोडेको स्थिति र जीवनशैलीलाई अन्य फुटबलरहरू र उनकी श्रीमतीको मनपराउने काम गर्दैनन्। दाऊदले र विक्टोरिया बेखम। ध्यान एक साधारण जीवन बिताउने मा छ, पत्नी र बच्चाहरु संग एकल समय खर्च। यो याद गर्नु उपयुक्त छ कि टिम आफ्ना बच्चाहरूसँग ह्यान्डआउट गर्न मन पराउँछन्। उहाँलाई, "बच्चाहरू सबै कुरा हुन्"
टिममा चार बच्चाहरू छन् जुन वास्तवमा सक्रिय खेल प्रेमीहरू हुन्। तीन (3) छोराहरू क्यो नाउँ गरेका छन्, शई र सबै भन्दा कम उमेरको कुनै खुलासा नाम र एक छोरी बहिनी छैन। तिनीहरू सबै आफ्नो पति रिबेका काहिलबाट आउँछन्।
ट्राफिजहरू मनाउने बेलामा प्यारा बच्चाहरू घिमिरे हुँदा अन्ततः टिम काहिलले कसरी पूरा भइरहेको छ र आनन्द दिन्छ। एकै परिवारले एक पटक भने 'परिवार सधैं फुटबल भन्दा पहिले आउनेछ'
उहाँले थप भन्नुभयो;
“मेरो परिवारसँग खुशीको अनुभव गर्नु एक चीज हो र मैले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन व्यतीत गरें। यसका साथै आउने सबै कुरा पनि [फुटबल] नक्कली हो। साथै, पैसा, सम्झौता र अखबारका शीर्षकहरू। परिवारको साथमा, तपाईले मलाई भोलि सब चीज लिनुहुनेछ, म अझै खुशी हुनेछु। यति लामो समय सम्म जब मेरो परिवार धेरै नजिक सँगै बस्दछन्, ती सबै मेरा लागि महत्वपूर्ण छ। ”
टिम काइल आफ्नो स्थिति केहि विशेषको रूपमा देख्दैनन्, बरु आफूले जानेको कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने छनौट गरेर। तिनी आफ्ना आमाबाबुलाई त्यस्तो परिस्थितिमा राख्ने श्रेय दिन्छन् जहाँ उसलाई कुशल प्रशिक्षकहरू द्वारा निर्देशित गर्न सकिन्छ र विभिन्न स्तरमा खेल्ने अवसरहरू छन् - धेरै व्यक्तिले उनलाई भनेका थिए कि उहाँ कहिलेकाहीं पेशेवर फुटबलर बन्नको लागि सानो हुनुहुन्थ्यो। ।
तर,हाफ ब्रिटिश, हाफ सोमन
यद्यपि काहिलको जन्म स्थान सिड्नी, अष्ट्रेलिया हो, उनका बुबा आयरिश मूलका हुन्, तर आफ्नो जीवनकालमा इ England्ल्याण्डमा बस्थे। काहिलले आफ्नो आमाबाट सामनको बासिन्दाको अँध्यारो रूप प्राप्त गर्दछ।
काहिलले आफ्नो बुबाको कारण आयरल्याण्डको प्रतिनिधित्व गर्ने विकल्प रहेको बताएका थिए तर उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्यारियरमा सामोआ र अष्ट्रेलियाको मात्र प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
आफ्नो युवा मा, काहिलले बलमैन पुलिस केटा क्लब, मार्कोभिल्ले फुटबल क्लब, र प्लमप्टन / ओखोरस्ट फुटबल क्लबको लागि फुटबल खेल्नुभयो।
उहाँ बस्नुभयो र एक युवाको रूपमा छोटो समयको लागि सामोआमा फुटबल खेल्नुभयो। उनले १ 14 वर्षको उमेरमा सामोन राष्ट्रिय फुटबल टीमको प्रतिनिधित्व गरे। १ 1998 2003 in मा मिलवाल वालवालिकाका लागि फुटबल खेल्न इ England्ल्यान्ड सारियो। समय बित्दै जाँदा उनी मिलवालको स्कुडको अविभाज्य सदस्य भए। काहिलको लोकप्रियता २०० really-२००। सीजनमा मात्र उत्रियो जब उनले मिलवाललाई एफए कप फाइनलमा पुग्न मद्दत गरे, म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग 2004-० ले पराजित भए।
यसले एभर्टनमा चासो जगायो। टिम काहिललाई एभर्टनको स्काउट्सले भेट्टायो र २०० 2004 को गर्मीमा उनी गुडिसन पार्कमा सरे। ऊ तुरुन्तै फिट भयो र एभर्टनको शीर्ष स्कोररको रूपमा सीजन समाप्त भयो र वर्षको एभर्टनका खेलाडीहरू भोट भयो। उही वर्ष, उनी २०० Australia मा अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय टोली, सॉक्रेरोजमा सामेल भए।
एभर्टनसँग इ a्लिस प्रिमियर लिगमा झन्डै एक दशकसम्म खेल्दा, २०१२ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क रेड बुल्समा सम्मिलित हुन उनी सरेका थिए। त्यहाँ उनलाई २०१ 2012 मा गोल्ड बुट र MVP बाट सम्मानित गरिएको थियो। उनको अन्तिम गन्तव्य चिनियाँ सुपर लिगमा शंघाई शेनहुआ ​​एफसी थियो। उनको बुट झुन्डिए पछि, उनी युनिसेफ राजदूतको रूपमा नियुक्त भए।
तर,एक व्यक्ति जसले संस्कृतिहरू गम्भीर बनायो
टिम कैहिल जीवनमा लामो बाटो आएको छ। "अस्ट्रेलियाबाट आएका, लन्डन, म्यानचेस्टर, लिभरपूल, सिड्नी, न्यु योर्क र त्यसपछि शंघाईमा बस्दै, मैले यसलाई एक साहसिक कार्यको रूपमा व्यवहार गरेको छु," उसले बताउँछ।
"मैले सबै संस्कृतिहरू, खाद्य पदार्थहरू, व्यक्तिहरू, जीवनशैली अँगालेको छु।"
तर यो साहसिक संग, काहिल लगातार बलिदानहरु को उनको परिवार को उनको सपना पालन गर्न को लागि बनाइन्छ को बारे मा सजग छ।
तर,रनिंग2फुटबल अकादमीहरू
उनको बारेमा अर्को ठुलो तथ्य यो हो कि, उसले दुई फुटबल अकादमी चलाउँछ। Wollongong पुलिस र सामुदायिक युवा क्लबको साझेदारीको साथ Wollongong अष्ट्रेलियामा एक, अर्को दुबईमा छ जुन उसले एल्साइट स्पोर्ट अकादमीसँग साझेदारी गर्दछ। दुवै 2009 मा सुरु भयो।
तर,भाइ छह (6) वर्ष को लागि जलाए
2008 मा, सेन काहिलले6वर्षको लागि ब्रिटेनमा आक्रमणको लागि जेल सजाय भएको थियो जसले आफ्नो पीडितलाई आंशिक रुपमा अन्धा छोड्यो।
आफ्नो 'क्रूर र भयrif्कर' उनको शिकारमा आक्रमणले उनलाई बेलायतमा एक खतरनाक व्यक्तिलाई लेबल गर्यो।
क्रिस्टन क्राउन कोर्ट मा जुलाई एक्सएनएनएमएक्सएक्स एक्स्युक्सक्समा ओर्पिंगटनबाट क्रिस स्टेपिले आक्रमण गर्न उनीहरूलाई पहिलो पटक दुर्व्यवहार गरिएको शारीरिक क्षतिको दोषी ठहरिएको थियो।
अनुसन्धानले प्रकट गरेको थियो कि उनीहरूले बारम्बार पीडालाई कुटपिट गरेका श्री स्टैपिले ईस्ट स्ट्रीटमा ट्याक्सी अफिसको नजिकको टाउकोमा उनलाई सिपाही दाँतसँग अर्ध-चेतना र उनको दाहिने आँखामा कडा रेटिना छोडेर छोडिदिए। श्रीमानले भने, पीडितले जीवनको खराब जीवनको सामना गर्यो र अब मात्रामा सर्वेक्टरको रूपमा आफ्नो क्यारियर लिन सक्दैन।
क्यारेर्ड क्याहलले बारम्बार श्री स्टेपाले आक्रमण गरी इन्कार गरे र उनीहरूलाई अष्ट्रेलिया, सिडनीमा पुन: गिरफ्तार गर्न अघि आफ्नो घरको देश अष्ट्रेलियालाई बेवास्ता गरे।
डिस्पोजेबल कन्स्टेबलले ब्रोली प्रहरीले आशा गर्नेछ: "श्री स्टेपेलीले क्रूर र भयrif्कर आक्रमण भएको कुराको लागि न्याय पाउन साढे तीन वर्ष भन्दा बढी कुर्दै आएका थिए।
सेन क्याहिलले आफ्नो संलग्नतालाई इन्कार गरे, भित्री फोन्सिक प्रमाणको सामनामा पनि। उनलाई अष्ट्रेलियाबाट हस्तान्तरण गरेपछि6वर्ष जेल सजाय गरिएको थियो। सजावट परीक्षण गर्न खडा गर्न अदालतमा ल्याउने सबै प्रयासहरूको भ्रामक थियो।
तर, आफ्नो भाइको पक्राउ र जेल मा प्रतिक्रिया
अस्ट्रेलियाई मिडफिल्डरले एक चोटि गोलमाल गरे र उसको कलाई पार गरेर मनाए जब उनी हन्डकफ्ड भएको थियो र पछि उसले खुलासा गर्यो - गोडिसन पार्कमा Good-१ को जीतमा एभर्टनको दोस्रो - उनको भाई सीनलाई, जसले six बर्षको जेलमा जेल हालेको थियो। आंशिक रूपमा अन्धो मान्छे यो पहिलो पटक हो कि क्याहिलले सार्वजनिक रुपमा वाक्य स्वीकार गरे।
Cahill ले भन्यो: “सामान्यतया, यो मेरो भाइको लागि हो। सबैजनाले मेरो अवस्था जान्दछन् र म गर्व गर्दछु कि ऊ खुशी छ र म खुशी छु र म सधै उसको बारेमा सोच्दै छु। मेरो परिवारको अर्थ मेरो लागि धेरै हो र यस फुटबल क्लबले पनि। यो अलि भावनात्मक भएको छ तर राम्रो छ। ”
एक एटनटन प्रवक्ताले आहिलको आलोचनालाई आलोचना गरे कि त्यो उत्सव अनुपयुक्त जस्तो देखिन्छ।
यसो भन्नु भएको थियो कि उनीहरु केहि उत्सवको पक्षमा थिएनन्, प्रवक्ताले भने: "गोल उत्सवहरू व्यक्तिगत मामला हुन्छन् र खेलाडीले निर्णय गर्नुपर्दछ कि कुनै पनि खेलाडीले जबसम्म खेलको कानूनमा रहेसम्म उसले के गर्न सक्दछ भनेर आदेश गर्दैन, जबसम्म यो सावधानी अपनाउँदैन।"
तर, अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो गोल झण्डा बक्सर
टिम क्याहिलको गोलले नायकलाई गोल गर्दै गोल गर्दैन। उनले इतिहासको पहिलो खेलाडी तीन अलग विश्व कप र तीन एशियाई कपमा स्कोर गर्न थालेको थियो। इतिहासको आठ खेलाडिले मात्र तीन अलग-अलग विश्वकपमा गोल गरेका छन्: काहिल, वान फारसी, अर्जुन रोबेन, रोबर्टो बगगोगियो, जर्गन क्लिन्सन र लोथर मथौस। पेले र उवे सेभरले चार अलग विश्व कपमा गोल गरे।
जम्मा, उनले विश्वकपमा पाँच गोल गरेका छन्। करीव international० अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा जसमा उनले एक गोल गरेका छन्, अष्ट्रेलियाले १ won जितेको छ, lost हारेको छ र drawn छक्का पनि। उनका गोल-प्रति-खेल अनुपात ०..30 को न्यूनतम २० क्याप्सको साथ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको बीच सबै-समय सूचीमा उसले 19 0.4875 औं स्थान ओगटेको छ।
उसको ट्रेडमार्क गोल उत्सव शैली फुटबल दुर्व्यसनीहरूलाई कुनै खबर छैन। कुनै पनि अष्ट्रेलियाली राष्ट्र संघको लागि उनी भन्दा बढी गोल गर्न सकेन।
टिम काहिल एक त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसले पीछा गरेका थिए र उनका सपनाहरूको साथ एभर्टन एफसीको साथ बाँचिरहेका थिए। यो टोफिसको लागि खेल्नु उसको बाल्यकालको सपना थियो।
तर,लक्ष्य उत्सव ट्रेडमार्क गलत हुन्छ
टिम काहिलको छाया बक्सिङ ट्रेडमार्क उत्सव एक पटक चिकी बेल केटाले एकपटक ट्रामप्ल गरिएको थियो। जानुहोस् उत्सव: क्यानडा झण्डामा दौड्नुहोस् र छाया बक्सिङ सुरु गर्नुहोस्। गीता बॉल केटाले नेस्टर्न कोस्ट मार्नर्स मा मेलबोर्न शहर को टकराव को समयमा अष्ट्रेलिया को फ्लाइट दिनचर्या संग हड़ताल को बर्खास्त गरे।
क्यालले पूर्वानुमानपूर्वक कुनाको झण्डा तिर दौड्यो र पागल केटोले टर्फबाट तान्यो र पछाडि पछाडि हिंड्यो पछि मात्र त्यसले आफ्नो छाया बक्सिंग प्रयासलाई रोक्न खोज्यो। टिमले यो अवलोकन गर्दा पातलो हावा बक्स गर्नुपर्‍यो।
तर,क्यू र ए
काम गर्ने तपाईको मनपर्ने तरिका के हो?
टिम कैहिल - "म एक खेलाडी होईन जो 90 ० मिनेट को लागी सबै फिल्डमा स्प्रिन्ट गर्न सक्दछ। मेरो लागि यो विस्फोटकको बारेमा हो ताकि जब त्यो अवसर आउँदछ, म द्रुत प्रतिक्रिया दिन सक्छ, डिफेन्डर भन्दा माथि उफ्रन्छ वा बलमा पुग्न पहिलो पाँच मिटर स्प्रिन्ट बनाउन सक्छ। म प्रयास गर्छु र मेरो जिमको कामको नक्कल बनाउनुहोस् ताकि मैले के अधिक ध्यान केन्द्रित गर्दछु हल्का तौलको साथ विस्फोटक आन्दोलनहरू। ”
तपाइँको नम्बर एक स्वस्थ खाना को लागी के हो?
मेरो लागि एक रात अघि म यो कुरा निश्चित गर्दछु कि म मेरो कार्ब्स र प्रोटीन पाउँदछु त्यसैले कुखुराको साथ पास्ता मेरो शरीरमा यसलाई मिल्काउन आवश्यक सबै उर्जा छ कि छैन भनेर पक्का गर्ने राम्रो तरिका हो।
तपाईं एक एथलीट हुन छान्नुभएको उत्तम फिटनेस सल्लाह के हो?
मेरो लागि यो सबै तपाईंको शरीरलाई जान्न र व्यवस्थापनको बारेमा हो। यसैले म अझै 35 XNUMX बर्षमा खेल्न सक्षम छु। त्यो र तपाईंको po को लागि विशेष प्रशिक्षणsitions / भूमिका।
तपाईको क्यारियरको मुख्य आकर्षण के हो?
मेरो लागि यो जापान विरुद्धको पहिलो विश्वकप जीत र दुई हप्ता पहिले हाम्रो एशियाई कप जित बीचको बीच छनौट गर्न गाह्रो छ। घरको माटोमा चाँदीको एउटा महत्त्वपूर्ण टुक्रा जित्नु भनेको त्यस्तो चीज हो जुन म मेरो गर्वको क्षणहरूको बारेमा सँधै विचार गर्नेछु।
विश्वकपमा तपाईंले नेदरल्याण्डको विरुद्ध गोल गर्नु एकदम राम्रो थियो! तपाईको लागि कुन मिति यादगार गोल हो?
नेदरल्याण्ड्सको बिरूद्ध स्कोर गर्नु त्यति अचम्मको कुरा भए पनि, म अझै आफ्नो जर्मनीलाई २०० 2006 मा जापानको विरुद्ध मेरो गोललाई मेरो क्यारियरको सर्वश्रेष्ठ मान्दछु।
एथलीटको रूपमा प्राप्त गर्न तपाईको लागि के बाँकी छ?
म अहिले शंघाई शेनहुआसँग चीन जाँदैछु र मेरो जीवनमा मैले अहिलेसम्म पाएको भन्दा कुनै फरक अनुभव पाउन सक्षम छु। म निश्चित रूपमा पार्कमा पनि वास्तवमै सकारात्मक प्रभाव पार्न खोजिरहेको छु!
यदि तपाईं फुटबल मा एक क्यारियर पीछा छैन, तपाईं सट्टा के गर्दै हुनुहुन्छ?
त्यो भन्न गाह्रो छ। म वास्तवमै सानो भएकोले म सधैं फुटबलर बन्न चाहन्थें। मलाई लाग्छ कि सम्भवतः मैले कुनै प्रकारको व्यापार पाएको छु।
तपाइँ फुटबल चलाउन पछि कुन योजनाहरू छन्?
मसँग फुटबल बाहिर बाहिर केहि वास्तवमै रोमाञ्चक परियोजनाहरु छन् जुन म निश्चित रूपमा अधिक समाई लाग्छु जब म समाप्त गर्छु। मलाई लाग्दैन कि मँ कहिले पनि खेलमा सामेल हुने छैन।
तपाईको दर्शन के हो जब स्वास्थ्य र फिटनेसको कुरा आउँछ?
मेरो लागि यो सन्तुलनको बारेमा हो। हो, म कडा प्रशिक्षण दिन्छु, तर म यो निश्चित गर्दछु कि म आफ्ना बच्चाहरूसँग फिफा खेल्दै त्यसमा सन्तुलन राख्छु। यदि मैले सबै दिन ट्रेन गरेको भए, म अहिले भस्म भइसक्ने थिएँ।
के तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाईंका छोराछोरी तपाईंको पालनामा पछ्याउनुहुन्छ?
मेरो दोस्रो जेठो केटा, शा, वास्तवमै राम्रो छ। म यो निश्चित गर्न चाहन्छु कि म उसलाई आफ्नै तरिकाले बनाउनको लागि अन्तरिक्ष दिँदै छु, उहाँमाथि धेरै दबाब नराख्नुहोस्। र मेरो year बर्ष पुरानो क्रूजले पक्कै पनि मेरो आत्म-संरक्षणको अभाव साझेदारी गर्दछ!
के एउटा चीज छ जुन धेरैलाई तपाईंको बारेमा थाहा छैन?
मलाई गाउने र संगीत मन पर्छ। मेरो जेठो छोरो, काहको अद्भुत आवाज छ र मेरा भाइहरू र मेरो परिवारको पनि धेरै प्रतिभाशाली छ।
उहाँले विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली, महंगी र तेजतम सडक कानुनी कार एक बगटटी भाइरोन 16.4को मालिक हुनुहुन्छ।